Yini powder izona kahle? Izinhlobo kanye nokwakheka yokuwasha izimpushana. Persil, Ariel futhi Tide: yini ukukhetha
Ukugqoka izingubo ezihlanzekile - akusiwona nje umuzwa nedumela, kodwa ngokuyinhloko inkinga yezempilo. Ukuze uqinisekise ikhwalithi izingubo ezihlanzekile, kubalulekile ukukhetha indlela efanele ukuqeda ukusilaphazeka. Thola lokho izona powder kahle, ekwehlukaneni lanamuhla akulula. Kuyadingeka ukuba baqonde indlela yokwakheka imikhiqizo ahlinzekwa, izakhiwo zabo eziyisisekelo izithako ezisebenzayo futhi ezingeni sokuphepha ngamunye. Yekuchumana uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Izinhlobo wokugeza powder
Ikhaya emizi iphutha wukuthi abaningi bathambekele noma luphi uhlobo nelineni wasebenzisa izindlela ezifanayo, uma they thola cishile ukuthi izona powder kahle. Kumele Lifanele uhlobo oluthile ihlule. Ngakho, uma ngabe ithuluzi yakhelwe ukugeza izandla ukuba siphumelele, ungazami ukuyisebenzisa futhi okuzenzakalelayo. ukusetshenziswa okungafanele, powder ngeke ibonise izindawo zabo ngokugcwele, nelineni azihlanzile ezimbi. Lezi izindlela zimumethe inqwaba izinto yakha Foam Fluffy, hhayi oyifunayo kuleli cala.
Yini namuhla kukhona izinhlobo ezahlukene yokuwasha izimpushana? Njengomthetho, ngezigaba wenziwa ku izicubu izinhlobo okuyiwona yakhelwe, noma ngezinye izindlela. Ngalokhu umbandela izimpushana zihlukaniswe jikelele (senzelwe zonke izinhlobo izicubu) ngoba wezinto zokwenziwa, uvolo, nelineni ukotini izinto. Intengo akuyona ezibucayi.
Ngakho uma umi ilondolo emikhulu, futhi zonke izinto zenziwa ukwaziswa okufanayo (isib, ukotini), kungcono ukusebenzisa umkhiqizo eshibhile, kodwa ezikhethekile kakhulu.
Ngaphambi kokuya izindlela eziphumelelayo Ukukhetha, kubalulekile ukuqonda isabelo yezingxenye ngazinye ezakha umkhiqizo othize. Kufanele uqaphele ikakhulukazi kunjalo, uma umndeni enabantwana noma abantu abanemizimba engezwani.
Isakhi esiyinhloko esebenzayo, okuyinto njalo ziyingxenye ye iyiphi powder yokuwasha kukhona surfactants noma okuthiwa surfactants, ngoba kahle uhlukanisa ukungcola kusuka kunoma iyiphi ukuthungwa ebusweni. ngezigaba zabo lifaka phakathi izinhlobo ezintathu, okungukuthi, cationic, anionic futhi nonionic.
Ingozi kuyinto uhlobo anionic, okuyinto luchazwa ngokuthi A lichaza ekwakheni surfactant. Lolu hlobo izinto ayimbangela yazo ezihlukahlukene komzimba nezinto, ebonakaliswa, isibonelo, ukuqubuka on kwesikhumba womuntu, kanye kakhulu ukunciphisa ukusebenza kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni.
Noma yimuphi surfactants esilimaza imvelo kanye nomzimba womuntu. Ngakho-ke, uhlambulule Ilondolo kanye nezakhiwo zamahhovisi ngakho kuyinto inqubo ebalulekile, ngoba ngokuhamba ke zonke izingxenye eziyingozi ziyasuswa ebusweni izicubu. Musa skimp, kugeze izinto kangcono futhi by egijima uhlelo ezifanele.
Ochwepheshe bezifo samanje yokuwasha izinga ayikwazi ukuqukatha amaphesenti angaphezu kwayisihlanu surfactants.
Kungani ngidinga enzyme?
Enzyme zivame isebangeni e izimakethe njengoba panacea, into, kubalulekile ukuba wokuwasha yimpumelelo. Ifuna yobukhona babo noma ukungabi ukuthi yiziphi powder izona kahle. Futhi, futhi ngezindlela ezithile, lokhu kuyiqiniso. Enzyme - kukhona izinto eziphila abakhuthele ezisetshenziswa ngempumelelo ibala ukususwa, amafutha ikakhulukazi, okuyinto zibhekwa eyinselele kakhulu.
Nokho, lezi zingxenye labo abazokwazi nokulimaza abanye kwezicubu ebucayi, ngakho izimpushana aqukethe kubo, kufanele siyisebenzise ngokuqapha.
Phosphate - kuyinto ukuxubana ephumelelayo izinsimbi kanye acid, okuyinto ngokuphawulekayo ithambisa amanzi okugeza kuwo evimbela kumiswa kodaka, okuyinto enomthelela inqubo ngempumelelo nokususa ukungcola.
Lokho sici: zonke wokuhlanza imikhiqizo ekhiqizwa emazweni aseNtshonalanga, musa sicuketse tincenye okukhulunywa, njengoba lezi izinto ukukhuthalele ezenza abantu basabele ngendlela iguliswa elihlobene ne kokubili isikhumba futhi umgudu. Ngo uthi abaningi, ukusetshenziswa kwazo akuvunyelwe emthethweni.
Lezi izinto esikhundleni zeolites, okuyinto musa zibangele noma iyiphi ukulinyazwa elalibazungezile noma impilo yabantu. Izimpushana yalolu hlobo ngokuvamile ifakwe "phosphate-free '.
Nquma uhlobo mhlophe
Ngezinye izikhathi kuyinselele ukuveza kakhulu isidingo ukhethe yokuwasha ilondolo for nelineni emhlophe. Kubalulekile ukwazi ukuthi izinhlobo Indwangu amakhorali, kunezinhlobo ezimbili. Ukuze uqonde ngoba abanye babo yokuwasha ethize, ungafunda ngokucophelela indlela yokwakheka yokugcina. Ngakho, uma ihlanganisa yiluphi uhlobo peroxy usawoti kusho ejenti zamakhemikhali kuba bleach abavamile, uma izinto ezenza Ukwakheka babe ifomula, aqala ngo- "C" - optical. Kusho ukuthini lokhu ku umkhuba, ake sicabangele eminye.
Can zibe mhlophe ilondolo powder abavamile
Ukuze uqinisekise imiphumela izinga, kuyoba kungcono ukusebenzisa yokuwasha "2 1". izimpushana okunjalo basonta noma uhlobo lokuqala noma lesibili ka brighteners okuye kuchaziwe ngenhla. Ngokulandelayo, asikhulume kabanzi mayelana ngamunye wabo.
Ngakho, i-ejenti zamakhemikhali amakhorali iyi-ejenti ogxile bleach noma peroxide. Lokhu powder ngenkuthalo ebhubhisa umbala lendwangu asifanele izinto olubucayi. Kodwa umoya-mpilo-bleach ezisele Indwangu. Ingasetshenziselwa for Noma iyiphi ingubo, kuhlanganise nombala.
brightener Optical akababhubhisi lendwangu jikelele umbala wakhe, kodwa ngempumelelo buso iyiphi amabala. Lokhu kungenxa izinhlayiya esiyingqayizivele lembhali ngaphakathi oyiyo.
Yini powder izona kahle - zamakhemikhali noma brightener optical? Njengomthetho, bobabili ungalunga, kodwa umehluko yabo eyinhloko - izindleko emaphaketheni.
Kukhethwa impuphu, yakhelwe ingane izingubo
Ukuba khona ekhaya wengane kudinga ukusetshenziswa zokuhlanza ezifanele nokugeza izimpushana. Futhi akusiwona nje namaqhinga abakhangisi! Ukwakheka izimali ezihlose izingane ihlukile ngempela kusukela omdala yalo. I izingxenye izimpushana zezingane nethonya mnene okuningi ku umzimba abasha. Ukusebenzisa kwabo is ibuye Kunconywa yokungezwani komzimba abagulayo.
Nabavoti engathandeki kakhulu iziphiwo zomusa ezahlukeneyo soda bleach. Ukuze ubone lokhu, kubalulekile ukufunda ngokucophelela indlela yokwakheka izimali.
Kuyinto ofanelekayo ukuba akhumbule ukuthi ijwayelekile besifazane abaningi insipho akuphephile izingane. A omningi base kufakwe ngezithako zawo, kunomthelela omubi isikhumba sengane. A indawo kungasilethela akubona bonke.
Indlela ukukhetha powder izinga?
Ukuze ukhethe indlela abaphumelela ngempela futhi iphephile, uma uthenga i-powder kubalulekile ukuba banake ezicashile elandelayo. Ukukhuluma ukungabi ubuthi ngokuvamile kuyiqiniso, ngakho kufanele indiva. Kuyadingeka ukulawula iphesenti izakhi ezikulesi izindlela Ukwakheka (hhayi amaphesenti angaphezu kuka-ezinhlanu surfactants hhayi angaphezu kwayishumi nambili - ukuze phosphate). Kungaba inzuzo engaphezulu ukuthenga kuka powder jikelele zonke izinhlobo Indwangu, futhi eziningana ezikhethekile. Libuye nesifiso sokuba izindlela ezihlukahlukene izinto ezinemibala nomhlophe, izingane (imindeni nezingane), futhi kusho enzyme ukususa amabala. Kubalulekile ukusebenzisa ekugeza tandla kanye othomathikhi eziklanyelwe zalo mkhiqizo.
Futhi cabanga Ingxenye izimali esetshenziswa. Isizathu salokhu siwukuthi yonke kilogram of izingubo wena ungigeza, kufanele akhawunti eyodwa isipuni powder spoon. ukuntula itawuholela eliphansi yokuhlanza kanye ngokweqile - ukuze eziphikelelayo iphunga abukhali futhi khona kwezinhlobo chemical ku lendwangu.
Omunye ethandwa kakhulu ilondolo yokuwasha iyona "Persil". Powder Liquid ibekwe njenge-agent ngempumelelo ukuze bahlanze kokubili izinto ezimhlophe namakhaladi (kuncike okuhloswe umkhiqizo othize, Nokho, kukhona izinto jikelele emgqeni umkhiqizo). Iqukethe enzyme, futhi ngaleyo ndlela can okukhipha ezihlukahlukene amabala, kuhlanganise iminonjana amajikijolo nakho konke iziphuzo (ngisho newayini elibomvu). Nokho, lezi zingxenye abakhuthele ngesikhathi sokusebenza powder, okuyinto eminyakeni emithathu kuphela. Nokho, Ngokusho kwesikhathi izakhiwo umkhiqizo njengoba remover ibala kulahleka, okugeza ngokuvamile kuba ezifanele. Futhi, ukuze izindlela zokuhlale izakhiwo zabo, kubalulekile ukuba uyigcine ezingeni lokushisa ezingekho ngaphezu amathathu nanhlanu degrees Celsius.
Powder Persil, kanye esebenzisa yimuphi omunye umkhiqizo, awukwazi ukugcinwa kanye ukudla noma ifinyeleleke izingane. Uma ejenti wakhwela nolwelwesi lwamafinyila, kufanele siyakazwe amanzi amaningi ahlanzekile.
Igagasi izimpushana ekhiqizwa ngumkhiqizi waseMelika odumile imikhiqizo chemical Procter & Gamble, zona ngokwazo isiqinisekiso izinga. Umkhiqizo umise ngokwaso njengoba umholi ongenambangi emkhakheni ilondolo egeza. kusho izingxenye musa ilimaze isakhiwo kwezicubu ukususa amabala yanoma yimuphi yinkimbinkimbi ngaleyo ndlela ngempumelelo. Isithunywa umugqa ethandwa - Tide Color - kusisiza ukuba silondoloze umfutho umbala. Yonke enye into, lokhu powder futhi uba ejenti isithokela for ilondolo.
Okubalulekile: Igagasi Powder (umshini) ayiqukethe phosphate esikhundleni ephephile kukhona zeolites. Njengoba izingxenye asebenzayo namanxusa bangabantu enzyme ukuthi alwe ngempumelelo izindawo. Ngesikhathi esifanayo, okuqukethwe surfactants anionic mkhulu inombolo evumelekile ngamaphesenti amahlanu.
Powder "eared nannies"
Leli thuluzi eziklanyelwe egeza ingane izingubo. Ingasetshenziselwa ngisho esimweni uma kuziwa ezintweni ewusana olusanda kuzalwa. "Nannies eared" is imakethwa njengendlela hypoallergenic. In the line kukhona imikhiqizo eyenzelwe kokubili egeza manual kanye othomathikhi. Ngokusho umenzi, isakhiwo kusho ukuthi kulula sasivumela ukususa izicubu, ngakho izinhlayiya musa bahlale endwangwini futhi akusho obulimaza isikhumba sengane.
Ukuze powder akaphelelwa impahla yayo, kufanele kahle egcinwe (endaweni epholile emnyama).
Nakuba ithuluzi yenzelwe ngqo izinto zezingane, liqukethe isamba esikhulu phosphate futhi surfactants-A (ezinhlanu kuya kwezingu-nanhlanu amaphesenti), okungase ibe nomphumela ongemuhle esikhumbeni.
Elithi "Ariyeli" powder
Enye brand owaziwa Ariel. lokhu powder brand iqukethe enzyme ngempumelelo uhlelo surfactant inhlanganisela. Isakhiwo kusho kuwukuthi uyakwazi nihlanze ngempumelelo nezicubu ngisho ashisa ongaphakeme (degrees amane). Powder Elithi "Ariyeli Gorny entwasahlobo" uyabona nomoya-mpilo-bleach, kanye kudala umphumela kukhanya optical. Inikeza yi ekhexisayo.
Ngemva kokuhlaziya lonke ulwazi ngenhla mayelana izingoma ilondolo yokuwasha ethandwayo kwakhe futhi wacabangela izimpushana kungaba iziphetho ezilandelayo. Uma ufuna ukuthenga ithuluzi kungaba ingane yakho ukuvikela imiphumela emibi amakhemikhali, akudingekile ukuba bachithe imali kwi-umkhiqizo ngokuthi "nannies eared." Lokhu powder ngempumelelo ngokwalo, kodwa ngezithako zawo akahlukile kwezinye "omdala" impahla. Ngokwesibonelo, "Tide", ngokuvamile, ivikeleke kakhulu, ngoba, ngokungafani "umhlengikazi eared", ayiqukethe phosphate ezilimazayo, kungaba nomthelela ukubukeka komzimba. I powder kusuka Procter & Gamble, bona esikhundleni zeolites sekuphephile, okusho ungawoni isikhumba sengane olubucayi. "Persil" kuphumelela kakhulu kokukhipha zonke izinhlobo ndawo, kuzwakala ngenxa okuqukethwe abalulekile enzyme. Kuyasiza ukuba leli thuluzi ekhaya, ngesikhathi ukuze bakwazi ukubhekana nezinkinga ukungcola sina. Nokho, akuyona ephumelela kunazo, uma ngaphambi umsebenzi Omuny izingubo zibe mhlophe. Kule ndaba, umholi Ariel - powder, esinikela elihlanza eliphezulu izicubu. Ngaphezu kwalokho, ngo-inqubo amakhorali Elithi "Ariyeli" ngeke kuyilimaze kwezintambo zesivikelo sesifuba Indwangu, ngaphandle kokubhubhisa isakhiwo sabo, kodwa izenzo ngqo ibala.
Uhlanzekile kakhulu inquma impilo yakho. Njalo wenze ukukhetha kwakho ngokuhlakanipha!
Anne Geddes - onodoli, kusukela okuzokwenziwa yavusa ngisho abadala!
Ummese "Opinel" abathandi yesiko
Ukuthatha "Canadian-oak" Tecos inkampani: incazelo, izithombe, izibuyekezo
Amabhethri musa shisisa efulethini: ukuthi benzeni, lapho ukuya khona?
Fish esikoleni - kuyini?
Fish weNcwadi Red: amafomu, izithombe
Smartphone "Lenovo A2010": ukubuyekezwa. Incazelo, izici, imiyalelo
Sorbent - Yini lokhu? Sorbents ngoba ubuthi. Indlela ukwamukela sorbents for komzimba
Indlela ukuvimba ikhadi Savings Bank?